Home News Maamul xumo ka jirta Xafiiska Maaliyadda Gobolka Banaadir & Daqligii oo hoos...
Maamul xumo ka jirta Xafiiska Maaliyadda Gobolka Banaadir & Daqligii oo hoos u dhacay
Xafiiska Maamulka & Maaliyadda Gobolka Banaadir ayaa waxaa ka jirta Maamul xumo sababtay inuu hoos u dhaco dhaqliga soo gala Gobolka Banaadir, Saddexdii bilood ee la soo dhaafay, kadib sida ay ku warameen ilo wareedyo ka tirsan Maamulka Gobolka Banaadir.
Dhaqaalaha Gobolka Banaadir oo ahaay mid hagaagsan, xilligii uu Duqa Muqdisho ahaay Allaha u naxariistee C/raxmaan Yariisow, ayaa warar soo baxaya waxa ay sheegayaan Saddexdii bilood ee la soo dhaafay inay jirtay Hoos u dhac dhaqaale oo aad u wayn.
Shaqaalaha Gobolka Banaadir ayaanan wax mushaar ah qaadan bil ka mid ah Saddexdii bilood ee la soo dhaafay, gaar ahaan Bishii August, kadib markii Dhaqaalaha Gobolka Banaadir soo gala uu gaaray meeshii ugu hooseysay, sidaasi waxaa MOL u sheegay xubin ka mid ah masuuliyiinta Gobolka Banaadir.
Hoos u dhaca Dhaqaalaha ee xilligaan ka taagan Dowladda hoose ee Muqdisho ayaa waxaa sabab u ah Ibraahin Mahad Alle oo ah Gudoomiye Ku xigeenka dhanka Maamulka & Maaliyadda Gobolka Banaadir oo aan khibrad badan u laheyn dhanka Maaliyadda.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Ibraahin Mahad Alle inta badan ay isku dhacsan yihiin Gudoomiyeyaasha Degmooyinka Gobolka Banaadir, taasina ay keentay in dhaqaale badan oo ka soo xarooda Degmooyinkaasi aysan ku dhicin Khasnada dowladda hoose, maadaama xiriir wada shaqeyn oo salfadhiyo uusan ka dhaxeyn Ibraahin Mahad Alle & Gudoomiyeyaasha Degmooyinka qaar.
Xafiiska maamulka & Maaliyadda Gobolka Banaadir ayaa lagu soo waramayaa inuu yahay mid cidlo ah oo inta badan aysan tagin hawlwadeenada kala duwan ee Degmooyinka Gobolka Banaadir, iyadoo wixii dhaqaale ah ee loo baahdo loo doonto Duqa Muqdisho Cumar Filish oo warqado ugu qora Maamulada Degmooyinka & Agaasimayaasha dhaqaalaha ay u baahan yihiin ee hawl fulinta u baahan.
Maamul xumada ka jirta nidaamka Maamulka & Maaliyadda Gobolka Banaadir ayaa sidoo kale sabab ka dhigtay in Ciidamada illaalada deegaanka ee Minishiibiyada si iskood ah ay isaga qaraabtaan Suuqyada Muqdisho oo dhaqaale ay u raadsadaan, kadibna jeebkooda ugu shubtaan wixii daqli ah ee soo gala.
Shaqaalaha Gobolka Banaadir ayaa sheegaya inay muujinayaan walaac ku aadan Bishaan sii dhamaaneysa inaysan heli doonin Mushaar, maadaama Xarunta Gobolka Banaadir ay ka jirto hadal hayn arrintaasi ku aadan, kadib hoos u dhaca Dhaqaalaha ee Gobolka soo wajahay.